Hosea 6.8-16 : ILAY FITIAVANA NOLAVINA
Hosea 6.8-16F.5ILAY FITIAVANA NOLAVINAIreto andininy ireto dia maneho ny halalin’ny fitiavan’Andriamanitra ny olony, na dia tsy niraharaha Azy aza izy ireo.“Nefa tsy fantany akory…” ny loza mananontanona azy (9). E...
Hosea 6.1- 7.7 : VOKATRY NY FAHOTANA
Hosea 6.1- 7.7F.3VOKATRY NY FAHOTANAFibebahana sarin-tsariny. Mahafantatra ihany ireto olony ireto fa noho ny fahotany no nahatonga loza ho azy. Fantany koa fa Andriamanitra ihany no vahaolana. Manantena ny famindr...
Hosea 5.1-15 : NY FITSARANA AN'I ISRAELY
Hosea 5.1-15F.3NY FITSARANA AN'I ISRAELYJehovah no miantso sy mitarika izany (1-4).Izy no miantso in-telo ny olona hiatrika ny fitsarana nanao hoe : Henoinareo, mandrenesa, atongilano ny sofinareo … Manam-pahefana...
Hosea 4.1-19 : NY HELOK'I ISRAELY
Hosea 4.1-19F.5NY HELOK'I ISRAELYTsy mahalala an’Andriamanitra (1-9). Fiombonam-piainana amin’Andriamanitra no hevitry ny hoe fahalalana Azy eto. Niala taminy i Isiraely ka lasa tsy manana fahamarinana na fitiavana...
Hosea 3.1-5 : FANAVOTANA AMIN’NY FANANDEVOZANA
Hosea 3.1-5F.6FANAVOTANA AMIN’NY FANANDEVOZANAAhoana no mbola hasain’Andriamanitra manambady indray ny vadiny izay efa nisaorany Hosea ?Hetsika ho famantarana (1-4). Manafintohina ny zavatra asain’Andriamanitra hat...
Hosea 2.16-25 : FAMPANANTENANA FAMPIHAVANANA
Hosea 2.16-25F.6FAMPANANTENANA FAMPIHAVANANAVady hampodiana rehefa avy nivadika tamin’ny fanekena.Fifalian’Andriamanitra ny manangana sy manarina antsika. Efa nisy fotoana ve tsy nahatoky tamin’ny vadinao ianao ? N...
Hosea 2.4-15 : HO RINGANA NY MPIODINA
Hosea 2.4-15F.5HO RINGANA NY MPIODINAVady tsy mahatoky. Toa adinon’ireto Isiraely ireto ny tanan’Andriamanitra mahery izay nitantana ny fiainany, nanafaka azy tany Egypta; nanome Azy ny tany Kanana ho lovany. Ny fa...
Hosea 1.1- 2.3 : FANAMBADIANA HAFA KELY
Hosea 1.1- 2.3F.1,5FANAMBADIANA HAFA KELYMankatoa ny baiko hitarihan’Andriamanitra (1-4). Mpaminany nirahina hanambady vehivavy janga i Hosea. Fantatra mazava fa tsy hitondra fiadanana sy fahasambarana ho azy manok...
Salamo 51 : FIBEBAHANA MARINA
Salamo 51.F.2FIBEBAHANA MARINAIzay tia adala. Indray harivariva, nitsangantsangana teo an-tampon’ny lapany i Davida mpanjaka no nahatazana vehivavy nandro. Avy hatrany dia nampanontany momba an-dravehivavy sy nampa...
Lioka 21.20-38 : EO AM-PIANDRASANA NY TOMPO
Lioka 21.20-38F.6EO AM-PIANDRASANA NY TOMPONy loza hanjo ny israely sy ny fampitandremana azy (20-24). Ny taona 70 dia tanteraka ireo zava-voambara ny amin’ny fandravana an’i Jerosalema sy ny tempoly noho ny nataon...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...203